Ihe abuo 2,000 anyi n’ebido! | Martech Zone
Wenezde, August 5, 2009 Sunday, November 3, 2013 Douglas Karr
Oge ikpeazu m mere ememme nke blọọgụ a bụ mgbe m karịrị ya 1,000 post akara na November nke 2007. Lee, anyị nọ na 2,000 posts na blog dị mma, ọ bụghị ọgaranya 🙂 ma mara ihe. Oge erugo ịhapụ ya na m ga-ebu nnukwu.
Na-abịa n'isi nso bụ obere rebranding nke saịtị… mba… na cheesy Windows 2000 remake abụghị preview! Offọdụ n'ime unu nwere ike icheta oge m gbanwere ngalaba site na dknewmedia.com ka martech.zone… nke ahụ bụ ihe izizi izizi kewara blog na aha nke m. Nke ahụ merụrụ ahụ! Etufuru m nke kachasị elu 1,000 na Technorati, furu efu TON nke backlinks (ọ bụ ezie na m 301'd na saịtị ahụ), ma tufuo ikike ụfọdụ. M mma ụfọdụ ogo na ụfọdụ Keywords m chọrọ kwụsị ezie… dị ka “Marketing Technology”.
Mgbanwe buru ibu buru ibu bu ndi oru ndi ahia ahia karie, onye obula nwere ikike ha:
Jon Arnold - ọkachamara na njiri mara weebụ.
Chris Bross - ọkachamara ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa.
Bọọlụ Lorraine - ọkachamara n’ahịa na mmekọrịta ọhaneze.
Chris Lucas kwuru - onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na ọkachamara na nkà na ụzụ ahịa.
Nila Nealy - ọkachamara na njirimara na atụmatụ.
James Okechin - ọkachamara na ntanetị na ntụgharị mgbanwe.
Adam Obere - ọkachamara n’ịzụ ahịa ekwentị.
Ọ bụ Bryan Povlinski - onye gụsịrị akwụkwọ na Marketing na nso nso a Orr Fellow… Bryan ga-enyere blog aka ma nye nghọta ya dị ka onye gụsịrị akwụkwọ na-eto eto.
Anọ m na mkparịta ụka na ụfọdụ ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa mpaghara ma nwee ike ịmalite ụfọdụ akwụkwọ ọrụ na-abịa, ụfọdụ akwụkwọ ntanetị, na ikekwe ọbụna ogbako.
E nwere ụfọdụ ọmarịcha ahịa saịtị dị n'ebe ahụ na-elekwasị anya na akụkọ, akụkọ nyocha ọhụụ na teknụzụ - mana enwere m olile anya iji mejupụta ọdịiche ahụ site na ịbụ blog ebe ị nwere ike ịnweta ndụmọdụ ndị ọkachamara iji rụọ ọrụ gị kwa ụbọchị. More na-abịa!
Nke a bụ ọhụrụ ọhụụ na-emechi isi na m blog. M ka ga-abụ onye isi na-esi nri na ịsacha karama ka anyị na-aga n'ihu, mana na-aga n'ihu anyị blog a ga-enye gị echiche dị iche iche na ohere ndị ọzọ ị ga - eme ndị ọkachamara anyị kwa ụbọchị.
Ọtụtụ ihe na-abịa!
Tags: blog teknụzụ ahịa
Ekelere Doug !! Jide ka iji! Daalụ nke ukwuu maka nghọta gị bara uru!
Kachasị mma maka ọhụụ gị!
Na-akpali mmasị n'ezie. Obi dị m ụtọ na ị nọ n'ọrụ! Ekwenyere m na nke a bụ nnukwu echiche na enweghị ike ichere ịhụ ihe na-eme ndị edemede ọhụrụ. Kwesịrị ịbụ mgbawa nke ọdịnaya! You ga-amalite blọgụ nke gị ọzọ? (ọ bụghị na ị ga-enwe oge ide ma ọ bụ ihe ọ bụla)
Agaghị m ahapụ, Jason! Aga m ede blọgụ - olile anya otu ugboro n'ụbọchị ma ọ bụ karịa. Naanị anyị ga-agbakwunye ụda olu ahịa na ngwakọta ma were ya!
Aug 6, 2009 na 12:45 PM
Ekele maka ihe dị mkpa. Obi dị m ụtọ na m bụ akụkụ nke puku na-esote
Aug 6, 2009 na 9:10 PM
Ekele maka ịkụ 2,000!
Ihe omumu na-adọrọ mmasị ga-abụ ileba anya na blọọgụ 2,000 gara aga wee chọta ntinye nke ị kacha jiri kpọrọ ihe. Ọ pụtaghị na puku abuo karịrị akarị, mana na ụfọdụ amatala ma nwee isi karịa ndị ọzọ.
Dịka onye na - agụ akwụkwọ oge niile, dịka ọmụmaatụ, amaara m na m na - eleghara ndenye gị "Njikọ maka Datebọchị a" mana ọ na - atọ gị ụtọ "iyi" mgbe niile. Ikekwe nyocha nke onwe gị nwere ike inyere gị aka ịnọgide na-emezi blọgụ gị maka ndị niile na - agụ akwụkwọ gị.
Ozo, na-ekele gi!